यसरी बन्दै छ ‘एनआरएनए स्मार्ट’ ! – News Portal of Global Nepali
3:43 PM | 8:28 PM
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन स्मार्ट एनआरएनए प्रोजेक्टको काम सुरु भएको छ । टेण्डरमार्फत नेपालको एक कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइएको संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले जनाए ।